कपाल नुहाउने बित्तिकै यी गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? सावधान !
Home समाचार कपाल नुहाउने बित्तिकै यी गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? सावधान !
६ कार्तिक २०७८, शनिबार ०८:५५
दिनभर आफुले गर्ने कामहरुको बारेमा ध्या’न न’दिँदा नै कपाल झ’र्ने र टु’क्रिने स’मस्या हुने गर्छ। त्यति मात्र हैन् कपालको स्य’हार गर्ने क्रममा थोरै गल्ती गर्दा पनि क’तिपय केटा मानिसहरुको त ता’लो नै खु’इलिन्छ।
हेयर एन्ड ब्यूटि एक्सपर्टका अ’नुसार नु’हायो भने कपालको ज’रा कमजोर भएर झ’र्ने गर्छ। यस्तो बेला गरेको थोरै गल्तीले पनि क’पा ल झ’र्ने र टु’क्रिने स’मस्या ब’ढ्दै जान्छ। आज हामी तपाईलाई थाहा नभएका नु’हाउँदा हुने गल्तीका बारेमा जा’नकारी दिन गइरहेका छौँ।
१.मालिस गर्नु : नु’हाउने बित्तिकै चिसो कपाल क’हिल्यै पनि मा’ लिस गर्नु हुँदैन्। यसो गरेमा कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या हुन्छ। त्य सैले गर्दा नु’हाउने बि’त्तिकै कपाल मालिस भु’लेर पनि नगर्नुहोला।
२.कपाल कोर्नु : नुहाउने बि’त्तिकै कपाल को’र्नु हुँदैन् । यसो गरेमा कपालको ज’रा क’मजोर हुने र टु’क्रिने स’मस्या ब’ढेर जान्छ।
३.हेयर स्टाइलिङ् मेसिनको प्रयोग : कपाल नु’हाउने बि’त्तिकै ड्रा’इ वा स्ट्रेट गर्ने मेसिनको प्र’योग गर्नु हुँदैन् । जसको प्रयोगले कपालको ज’रा क’मजोर भइ झर्ने र हाँगा आउने स’मस्याहरु बढेर जान्छ।
४.कपाल बाँध्नु : नु’हाउँने बि’त्तिकै चि’सो कपाल बाँ’ध्नु हुँदैन् । जसको का’रण कपालमा इन्फिेकसन हुनुको साथै चा’याँ ब’ढ्ने क’पाल झ’र्ने जस्ता स’मस्याहरु ब’ढी हुन्छ।
५.तुरुन्त बाहिर नि’स्कनु : चिसो कपाल लिएर बाहिर नि’स्कनु हुँदैन् जसले गर्दा कपालमा इ’न्फेकसन हुनुको साथै धुलोहरुको का’रण चाँया ब’ढ्छ र क’पाल झ’र्ने स’मस्या ब’ढ्छ।
अघिल्लो पोष्टफर्सीको मुन्टाको तरकारी खाने गर्नु भएको छ ? फर्सीको मुन्टा खानुका फा’इदा
अर्को पोस्टसम्बन्ध तोडे आफूसँग रहेका फोटो/भिडिओ बाहिर ल्याइदिने समीक्षाको चेतावनीपछि पलले गरे समीक्षासँग विवाहको लिखित सम्झौता !(हेर्नुस)
काठमाडौ । टिकटक यतिबेला सबैमाँझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । टिकटक एपबाट नै लाखौ, क'रो'डौ कमाउने नेपालीहरु नै छन् भन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ...
काठमाडौं। तपाइँको नयाँ गाडीको नम्बर नै तपाइँको लागि सं'क'ट'को कारण ब'न्यो भने के होला ? नम्बरकै कारण तपाइँले मानिसहरुको अगाडि लज्जित हुनुपर्यो भने के...